M က. Jans ကပြောပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 21, 2009 တွင် 1:18 ညနေ
ဒီ Screenshot ငါနှင့်တူသောအားလုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှတိုင်းဘာသာပြန်ထားသောဆိုက်ကိုထည့်သွင်းပြီဟုပြောစရာရမယ်
* တိုင်းဆိုက်ကိုသိုလှောင် (ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်-content များအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်လို dont ကြောင့်).
* တစ်ဦးစောင့်ဆိုင်း 6-10 တနေ့ indexing များအတွက်, နှင့်အခြား 4-5 sea​​rch engine ကရလဒ်အတွက်နေ့ရက်များ
အောက်တိုဘာလ 5, 2009 တွင် 7:26 ညနေ
ယနေ့ကြိုးစားခဲ့. very nice plugin ကို. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် !
အောက်တိုဘာလ 7, 2009 တွင် 12:38 နံနက်
ဒါဟာကောင်းတဲ့ plugin တခုဖြစ်တယ်ဒါပေမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်. တစ်ပို့စ်ဘာသာပြန်ထားသောသည့်အခါတိုင်၏ဘာသာပြန်ထားသောမိတ္တူကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားရပါဘူး?
ကျွန်မဂလိုဘယ် Translator သုံးပြီးကြောင့်အားလုံးဘာသာပြန်ချက်များကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားပါသည်ခဲ့ကြနှင့် Google ကသူတို့ကို Index လုပ်.
အောက်တိုဘာလ 8, 2009 တွင် 11:05 ညနေ
အခြေခံအားဖြင့်တော့ဟုတ်ပါတယ်, ဘာသာပြန်ချက် site ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောနှင့် Google Index ဖြစ်ပါတယ် (ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့)
တကယ်တော့, ကျွန်မသိသောအခြားသော plugins ထက်အပြောင်းအလဲများနှင့်မှတ်ချက်များပို့ရန်ပိုလွယ်ပြင်လွယ်သည်
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [f5552f2]: FQDN rel အခြားထောက်ပံ့ Add. အပေါ် update ကိုစစ်ဆေးမှုများပိတ်ပင်တားဆီးမှု Remove ... ဇွန်လ 17, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [1437f05]: fqdn အခြား hreflang ကိုထောကျပံ့ဖို့ parser ကို fix ဇွန်လ 17, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [5e28fc3]: v1.0.0 လွှတ်ပေးရန်အံ့ဆဲဆဲဖြစ်ပါသည် ဇွန်လ 15, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [bece739]: .JS လိုင်စင်ဖိုင်တွေများအတွက် Update ကို, ယခုအခါသူတို့ကိုမပါဝင်ပါ ... ဇွန်လ 15, 2018
Kudrat အပေါ် version 1.0.0 – အချိန်ရောက်လာပြီ